Kukholelwa kahle ukuthi ukuhamba yinto eyodwa oyithengayo ukuze ube yisicebi noma uzizwe ucebe! Futhi akudingekile njalo ukuthi uhlukane nemali oyithole kanzima ukuze ujabulele ingcebo. Ngenkathi uhlela ukuphuma kulezi ziqhingi ezishisa kakhulu zelanga, noma imithambeka egcwele iqhwa, uma kungenjalo ihlane eliluhlaza okotshani, wenza izinqumo eziningi njalo. Yenza iphupho lakho lifezeke ngokungenzi okufanayo kube nzima kakhulu. Hlala neqembu lakho bese nihlela kusabelomali sakho. Yenza lonke lolu hambo lube lolutheni. Ukuhamba ngamaqembu kuyindlela enhle kakhulu yokuba nobungani obuhle. Kepha hhayi konke ukuhamba ngesikebhe kahle, uma kungahlelwanga ukuphelela. Kungazwakala kungenangqondo ukulandela umkhondo wezindleko zohambo, kepha kukhona okuningi okufihliwe kulo. Vikela zonke izimfanelo ezingezinhle ezihlobene nohambo lwamaqembu futhi uhlele ngokunengqondo. Funda ngezansi amathiphu ayisithupha angenazinkinga okuyi-savvy ukuhlela uhambo lweqembu oluhambisana nesabelomali.
Yebo! Ushaye khona! Kufanele unqume endaweni oya kuyo kuqala ukuze wazi ngokwazi izindleko. Kepha kwesinye isikhathi kuyakhohlisa, njengoba bobabili behlangene. Futhi kuyindaba eyinkimbinkimbi kakhulu nayo. Noma uhlela uhambo lwakho olulandelayo neqembu labangane, akubona bonke abangakwazi ukukhokha ngokulinganayo. Ngakho, hlangana nebhajethi elinganiselwe, uthathe isinqumo ngokuvumelana. Konke ukuhlela kuzoba bushelelezi, njengoba iningi eqenjini ngeke kudingeke lizizwe licindezelwe ekusebenziseni inani elithile. Futhi, ukuthatha izinqumo ekukhetheni indawo okuyo kuba lula, ikakhulukazi ngesabelomali esimisiwe engqondweni. Ngokuvumelana nalokho, wena, kanye namanye amalungu eqembu, angabiza izindleko ezengeziwe njengezindiza, ukuqasha, ukudla, ukuphuma, nokunye okuningi. Ukubambisana ngokuphelele yilokho okudingekayo, ngenkathi uhlela uhambo lweqembu, ukugcina ubunye.
Zama ukuthola ukuthi ungahlukanisa kanjani izindleko. Nquma izindlela nezindlela zokuhlukanisa izindleko phakathi kwamanye amalungu eqembu. Ngokwesibonelo, uzoba nesibopho sakho sonke ukubhuka kwamakamelo ehhotela, noma kufanele ngabe wabelana ngokulinganayo? noma, unentshisekelo yokuthatha imisebenzi efana nokuqashwa kwecab nokuphuma kwansuku zonke? Kohambo oluningi lwamaqembu, ukuthatha i-chunk ethile yomsebenzi kuyancomeka ngokuvamile. Yehlisa izinkinga futhi ibuye idlule yonke izindleko ezihlobene nokuhamba.
Uma uhlelele uhambo olusabelwe imali maduze, zama ukusetha i-akhawunti ngayinye. Kufanele wenze kahle ngaphambi kwesikhathi. Bonke ababandakanyekayo ohambweni lweqembu bangabeka inani elithile, njalo ngenyanga, ukonga ama-hassle womzuzu wokugcina. Kuyisenzo esibukhali sokubamba amahhotela amahle, izindiza-moya, futhi cuisine omuhle kakhulu.
Ngenkathi ku-spree yokuhlela uhambo lweqembu, sebenza kancane ngemali yakho. Gxila kwezithwali zentengiso. Kunezindiza eziningi ezingabizi kakhulu, ukusingathwa kwamaphakeji ambalwa okuhamba. Hlela ukunyakaza kwakho okulandelayo ngokuxoxa ngama-nuances afihliwe nabalingani bakho beqembu. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuhlehlisa uhlelo lwakho lokuya eRoma, Athens, kanye ne-Istanbul ngeMalta. Okanye, ukuqala uhambo lwakho lweqembu kusuka IBerlin iya ePrague, I-Budapest neRiga kumi ukukhetha okuhle! Futhi kuthiwani ngohambo lomgwaqo noma uhlangabezana nekhempu elihlala isonto lonke endle namaqembu wakho womshado? Isikhathi esiningi, isimo sezulu sisebenza njengesithiyo. Kungakhathalekile ukuthi imvula enkulu, ukushisa kwelanga noma ukushaya komoya, ukuhamba ngemoto usizwe nayo uphahla wethala, kuyisibusiso! Ikhuthaza ukumboza ngokuphelele nokufakelwa phansi kwemithwalo efakwe ngenkathi kusenziwa konke nesipiliyoni travel opholile.
Uhambo lweqembu ngokuvamile luyimpumelelo lapho kungekho ngxabano noma ukuphikisana okuhlobene nokudla, ikakhulukazi. Yebo! Iningi lamaqembu lishiya ukwedelela 'ukwedlula lapho umbuzo uphakama ngokuthandwa kokudla kwelungu ngalinye. Ezimweni ezinjalo, ukucabanga okuhle nokudla okunempilo kufanele kube yisiqubulo sakho. Ukusabalalisa endaweni yokudlela kuqinisekisa izinkinga nokudideka phakathi kwabalingani beqembu. Ngokwesibonelo, eqenjini labayishumi, umuntu oyedwa ukhokha wonke umthethosivivinywa we ibhodlela lewayini, futhi kamuva abanye abantu eqenjini bayakhokha isikhashana, ukudideka okukhulu kuzokwenzeka. Ngakho, kholwa ngokuhlukanisa isheke njalo. Okanye, ungakwenza nge- 'buddy-pairs.' Hlela isabelo sakho nomuntu othile eqenjini bese uqhubekela phambili ngokukhokha inkokhelo.
Wakha iqembu kulezi zinhlelo zokusebenza, lapho amalungu eqembu engena ngemvume ngokushesha futhi angahlukanisa zonke izindleko ngamaphesenti. Izaziso zithumela izikhumbuzi ezinobungane kubantu abahlukahlukene abathintekayo ekususeni umthethosivivinywa. Ngenkathi uhlela ukuhlanganisa izindleko zokuhamba kweqembu, Gwema ukugcina imvumelwano noma ukuxazulula ngokukhokha ngamazwi. Khumbula lokhu ukuzwa ukuthula phambili.
Lapho nje ujabulele uhambo lwakho lweqembu nomhlaba wakho ngokujabula ekhaya, sekuyisikhathi sokukhokha izindleko zakho zakudala (uma ikhona)! Kungcono ukukhokhela zonke izikweletu ezindala, ngesikhathi sohlaka ovumile ngalo. kungenjalo, imile njengempahla! Abaningi bakhetha ukukhokha nge izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene online, njengoba izwakala i-savvy. Futhi abanye abantu abanomqondo wokonga bathanda ukuzikhokhela mathupha, ngokheshi. Qinisekisa ukuthi uyakhokha kungakapheli isonto noma ngalapho. Okanye, uzolahlekelwa isimemo sohambo lweqembu elilandelayo.
Lutho, kodwa ukukholelwa okuyiphutha phakathi kwabaningi ukuthi ukuhamba emhlabeni jikelele akunakwenzeka ngaphandle kwekhadi lesikweletu elingenamkhawulo noma ukungena kwemali. Noma uma othile exhasa lonke uhambo! Kepha kungcono ukungakholelwa kuye. Kuyaqikelela ukuthi akukho hambo olwenzekayo ngaphandle kokuchitha. Imihlahlandlela esishiwo ngenhla izogcina wena neqembu lakho lezihambi lihlangana ndawonye ohambweni oluningi oluzayo. Cacisa izinqumo zakho, futhi usebenzisane nabanye ohamba nabo, khona-ke uhambo lweqembu ngeke lube ngaphansi kwephupho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “6 Amathiphu weSavvy Ukuhlela Ukuhamba Kweqembu Kwisabelomali” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/group-trip-on-budget/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
budgettravel iqembu GroupTrip ukuhambahamba traveltips TripOnBudget